प्रज्ञाजस्तो निकायमा नियुक्त हुनेले स्वयंसेवा गर्ने चलन बसाल्नुपर्छ
मगलवार, पुष १०, २०७५ सेतोखरी
गंगाप्रसाद उप्रेती कुलपति, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपतिमा केही समय अगाडि नियुक्त भएका गंगाप्रसाद उप्रेतीको यो तेस्रो कार्यकाल हो । आठ वर्ष अगाडि उनी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा उपकुलपति भएर प्रवेश गरेका थिए भने त्यसपछिको अवधिमा उनी कुलपतिमा नियुक्त भए । यस पटक फेरि पनि उनी अर्को अवधिका लागि एकेडेमीको कुलपतिमा दोहोरिएका छन् । उनी आफूले काम गरेकोले नै आफ्नो नियुक्ति भएको बताउँछन् भने बाहिर बसेकाहरु प्रज्ञाले केही गरिरहेको छैन भन्दै आएका छन् । यिनै विषयहरुमा शुक्रबार प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति उप्रेतीसँग बाह्रखरीका राजेश खनालले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश :
तपाईं कुलपतिमा आएको एक महिना पछिमात्रै एकेडेमीले पूर्णता पायो । यति ढिला किन ?
जब केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, त्यसैबेला मैले उहाँलाई भेट्दा भनेको थिएँ, जाने र आउने टिम सँगसँगै होस् । मैले त्यसै बेला जसलाई एकेडेमीमा ल्याउन् छ ल्याउनुस्, तर समयमै ल्याउनुस् भनेको थिएँ । धेरै समय नलिनुस्, त्यसो भएपछि ग्याप हुँदैन भनेको थिएँ । यसरी भयो भने सबैको समयमै नियुक्ति हुन्छ । तर पछि गएर तीन वटा एकेडेमीलाई मर्जर गर्ने कुरो उठ्यो । त्यसले पनि केही समय अन्योलमा राख्यो । किनभने जारी रहेका ऐनले गर्दा मर्जरको कुरो तत्कालका लागि नमिल्ने भयो । ऐन संशोधन गर्न तत्काल सक्ने कुरो पनि थिएन् । त्यसैले समयमा केही हुन सकेन । यसरी अन्योलमा दुई तीन महिनै बित्यो । मर्जर हुने अवस्थामा एउटा कुलपति, तीन वटा उपकुलपति र अन्य परिषद् सदस्य गर्ने किसिमबाट काम हुनुपर्दथ्यो । तर कानुन परिवर्तनका कुरा उठेपछि प्रधानमन्त्रीले पनि अहिलेलाई तीनै वटै एकेडेमी रहोस् भनेरै सोही अनुसार गराउने गरि काम थाल्नुभयो ।
समय त लामो नै लाग्यो नि ?
ढिलो हुनुको कारण केही प्राविधिक समस्या पनि हो । मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका कारण पनि यसको पूर्णतामा ढिलाई हुन गएको हो । त्यस माथि ऐन संशोधन र परिवर्तनका कुराहरुले पनि छलफलको कुरा लम्बियो । तरपनि पहिलेको तुलनामा यस पटक छिटो नियुक्ति भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
अर्को कुरा, हाम्रोजस्तो मुलुकमा कुनै पनि यस्ता पद खाली हुँदा दौडधुप ज्यादा हुँदै आएको छ । हुनु पनि पर्छ । किनभने योग्य मानिसले त आफूलाई त्यो ठाउँमा आफूलाई राखेर हेरेको हुन्छ । प्रकारान्तरले कोही छानिएर आए, एक टर्मका निमित्त । तिनै मात्रै त सबैथोक होइनन् । त्यही स्तरका त बाहिर पनि होलान् । तर खाली भएको बेला मानिसले प्रयत्न गर्छन् नै । त्यसैले पनि ढिलो भएको हुनसक्छ ।
दौडधुपको प्रथालाई राम्रो मान्न सकिएला ?
यसका विषयमा राज्यले अर्को किसिमले सोच्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ । अब ऐन संशोधन गरिँदा यतातिर ध्यान दिइनु पर्छ । त्यसो त ऐनमा स्पष्ट छ कस्ता व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्ने भन्ने कुरा । तर पनि यो दौडधुपको परम्पराको अन्त्य हुनुपर्छ । यतातिर राज्यले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
पहिलेपहिले त प्रज्ञामा पार्टीका मानिस ल्याए भन्थे । यस पटक पनि यो चर्चा नउठेको होइन । तर पनि तुलनात्मक रुपमा पहिलेभन्दा यस पटक त्यस्तो राजनीति हावी भएको देखिँदैन ।
यस्ता संस्थामा दलीय भागवण्डाको नियुक्ति लाई राम्रो मान्न कसरी सकिन्छ ?
जब दलहरुबाट सरकार चल्न थाल्यो वा बहुदलीय व्यवस्थाको सूत्रपात भयो, त्यसपछि नै यस किसिमको कुरो उठेको हो । म त भन्छु प्राज्ञिक संस्था हामीले नै बिगार्यौं भागबन्डा गरेर । पद हेरेर यो फलाना पार्टीको मानिसका लागि, यो फलाना पार्टीको मानिसका लागि भनेर छुट्याइयो । यसरी भन्न मिल्छ ? कुन पद हो, के हो, त्यसका लागि राम्रो मानिस छान्ने हो भने त सबै पार्टीका राम्रा र योग्य मानिसहरु त्यसमै पर्छन् नि । त्यस्तो अवस्थामा काम गर्ने मानिसहरु पो ल्याउने हो त । यसो गर्दा पार्टीभित्रका विज्ञ पनि केही पर्लान् ।
बाहिरका विज्ञ पनि केही पर्लान् । यो दलको यति र यो दलको यति भन्ने त कुरा नहुनुपर्ने हो । काम गर्ने मानिस ल्याउने हो । त्यसैले पनि यसमा विकृति आएको निश्चित हो । प्राज्ञिक संस्थाहरु खुला वातावरणमा कसरी चलाउने भन्ने नीतिमा सरकार चुकेको हुनाले पनि यो स्थिति आएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि भनेको छु सकेसम्म यसलाई करेक्सन गर्ने तर्फ लागौं । यसका लागि त समय लाग्ला । तर अहिलेको नियुक्तिमा जुन मानिसहरु आउनु भएको छ, मलाई के लाग्छ भने उहाँले सोचेरै काम थालिसक्नु भएको छ ।
तपाईं कुलपतिमा दोहोरिनु भयो । पछिल्लो समयमा चार वर्ष उपकुलपति पदमा पनि रहनुुभयो । यसरी आठ वर्ष प्रज्ञामा रहेर फेरि पनि नियुक्त हुनुभएको छ, के लागिरहेको छ ?
वास्तवमा यो जागिर खाने ठाउँ होइन । मैले जागिर खाएको भनेको त्रिविविमा हुँदा नै हो । अहिले म प्रज्ञामा आएको छु र यहाँ मैले बनाउने हो । अर्थात् प्रज्ञालाई बनाउनका लागि नै म आएको हुँ । यसलाई केही ‘कन्ट्रिव्युसन’ दिने हो । हो, यसरी काम गरेवापत पाइने केही कानुनी आर्थिक सुविधा छन् भने त्यो लिइन्छ । तथापि हामी यहाँ आएको भनेको केही काम गर्नलाई नै हो । भाषा साहित्यको विकास र सेवाका लागि नै हो ।
पछिल्लो समय प्रोपोगण्डा पनि भयो । प्रधानमन्त्रीसँग निकट भएको भन्दै मेरो व्यापक आलोचना नभएको होइन । तर स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने, म उपकुलपति हुँदा माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र बैरागी दाइलाई कुलपति बनाइनुभएको थियो । पहिलेपहिले म एकेडेमीसियन छान्ने विज्ञ समूहमा पर्थे । पछि मात्रै म उपकुलपति भएँ । त्यस बेला पनि मैले मभन्दा विज्ञ व्यक्तिहरुलाई जान आग्रह गरेको पनि थिएँ । तर उहाँहरुले यो ‘म्यानेजेरियल पोष्ट’ पनि भएकोले तपाई जानुस् भन्नुभयो र म आएँ । त्यतिबेला नयाँ चुनौति थियो । नयाँ चुनौतिलाई ग्रहण गर्दै हामीले काम थाल्यौं ।
त्यसपछि कुलपतिमा नियुक्त हुँदा सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । मलाई उहाँले नै नियुक्त गर्नु भएको थियो । मलाई के लाग्छ भने मैले गरेको काम हेरेर नै उहाँहरुले मलाई कुलपतिमा नियुक्त गर्नु भएको थियो । यदि मैले काम गरेको हुन्नथिएँ भने मेरो नियुक्ति हुने थिएन । मलाई के लाग्छ भने म निगाहले होइन कि मेरो कार्य क्षमताले यहाँ नियुक्त भएको थिएँ । यो मानिस आवश्यक छ भनेरै ल्याइएको थिएँ ।
त्यसबेला सपथ ग्रहणका बखतमा मैले सुशिल कोइरालाजीलाई भनेको पनि थिएँ, एकेडेमीको संचालनका लागि तपाईहरुले चिन्ता लिनु पर्दैन । हामीलाई तपाईहरुले चाहिएको सहयोग मात्रै गर्नुस् । हामी काम गरेर देखाइदिन्छौं । तर प्रधानमन्त्रीले भन्नु एउटा कुरो हो । अर्थ मन्त्रालयले त्यस किसिमको आर्थिक सहयोग गर्नु अर्को विषय हो । तथापि हामीले एकेडेमीको गरिमा बढाउन काम गरेका हौं ।
त्यो बेला के गर्नुभयो त ?
एकेडेमी अन्तर्राष्ट्रिय बौद्धिक जमातको केन्द्र पनि हो है भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्नु जरुरी थियो । त्यसैले सोही अनुरुपको काम गर्नु थियो । तर मुखले भनेर मात्रै त काम हुँदैन । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वृद्धिका लागि विभिन्न मुलुकहरुसँग सहकार्य गर्न थाल्यौं । अर्को कुरो, एकेडेमी भनेको ज्ञानको स्रोत पनि हो । पहिले यहाँ हेर्ने भनेको पुस्तकालय हो । पुस्तकालय कस्तो छ, त्यसैले स्पष्ट पार्छ ज्ञानको भण्डार कस्तो छ भन्ने । त्यसैले हामीले यहाँको अस्तव्यस्त पुस्तकालयलाई व्यवस्थित गर्ने सोचाइ बनायौं र त्यस तर्फ काम थाल्यौं । तर त्यसका लागि सरकारबाट पैसा प्राप्त हुनसक्ने अवस्था थिएन । अनि हामीले सहयोगीको खोजी गर्यौं र भारतीय सहयोगमा पुस्तकालय भवनको निर्माण गराएर त्यहाँ पुस्तकालय व्यवस्थापन गर्यौं । अब आज समय अनुसार यहाँ रहेका किताबहरुलाई डिजिटाइज्ड गर्ने प्रयत्नमा लागेका छौ । हाम्रो पुस्तकालय पूर्णतः डिजिटाइज्ड भइसके पनि अन्य पुस्तकालयहरुसँग सहकार्य गरेर पाठकका लागि सहज तुल्याउने प्रयासमा हामी लागेकै छौं ।
त्यसैबेला यो भवन पनि पुरानो भइसकेकोले यसको मर्मतको कुरा पनि उठायौं । यो भवनको मर्मत जरुरी भएकोले यता पनि हामीले लाग्नु जरुरी थियो । त्यसैले सरकारसँग अनुरोध गरेर यसको मर्मतको कार्यलाई अगाडि बढाएका हौंं ।
साहित्यिक वृत्तमा त एकेडेमीले देखिने काम त केही गरेन भन्छन् नि ?
त्यो त नबुझ्ने मानिसहरुले भन्ने कुरा हो । कति काम भएको छ, त्यो त यहाँ आएर हेर्नु पर्यो नि । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका केही काम गरिसकेका छौं । देशका हरेक कुनामा एकेडेमीलाई पुर्याउने काम गरिरहेका छौ ।
साहित्यकारहरुकै गुनासो हो यो
हामीले कति काम गरेका छौ भन्ने त सरकारलाई प्रतिवेदन नै बुझाएका छौं । आफूले भनेजस्तो भएन कि गाली गर्ने प्रचलन छ यहाँ । हामीले अघिल्लो कार्यकालमा एक सय पचास वटाभन्दा बढी किताब छापेका छौं । हरेक भाषाका शब्दकोशहरुको प्रकाशन गरेका छौं । विभिन्न भाषालाई लिएर अध्ययन अनुसन्धानका कामहरु गराएका छौ । देख्नेले कवि गोष्ठी गरेको मात्रै देख्छन् ! एकेडेमीबाट पत्रपत्रिका, किताबहरु त्यतिका प्रकाशित भएका छन् । त्यसका लागि त आउनु पर्यो, हेर्नुपर्यो, किन्नुपर्यो नि । यतिकै भनेर हुन्छ ? वि.सं. २०१४ सालमा स्थापना भएको यो एकेडेमीले आज गरेको कामहरुलाई तुलना गरेर हेर्नुस् त, कति काम गरेको छ कति । त्यतिकै गाली गरेर हुन्छ ?
पहिले अध्ययन अनुसन्धान जो प्राज्ञ हुन्थे उनैले गर्थे । हामीले भने अध्ययन अनुसन्धानका कार्य सबै विज्ञ व्यक्तिहरुको जिम्मा लगाएका छौं । त्यो प्राज्ञिक र साहित्यिक काम होइन ? हामी कहाँ हरेक कुरालाई नेगेटीभ रुपमा हेर्ने चलन छ । तर नेगेटीभ बोल्ने आधार त चाहियो नि । मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, आएर हेर्नुस् हामीले के गरेका छौ र कति गरेका छौ भन्ने । देशभरिका साहित्यकारहरुलाई भाषा भाषीलाई हामीले समेटेका छौ । यदि भएन भनिन्छ भने तिनलाई सोध्नुस् न के भएन ? के हुनुपर्दथ्यो ? तिनले पनि त आएर भन्न सक्नु पर्यो नि यो यो भएन भनेर ।
यस्ता कुरा किन आउँछ ? तिनलाई एकेडेमीले किन समेट्न सक्दैन् ?
समेटिरहेको छ । कराउनेहरुले पनि यहाँ आएर गोष्ठीमा भाग लिएका नै छन् । कतिले वृत्ति लिएर अनुसन्धान पनि गरिरहेका छन् । कुरो के हो भने जतिसुकै गरेपनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको परिषदमा नियुक्ति हुने त ११ जना मात्रै हुन् । बाहिर ११ सय मानिस छन् । सबै त एकेडेमीमा आउन सक्दैनन् । प्रकारान्तरले एबीसी गर्दै हामी आयौं । अर्को पटक अर्को मानिस आउलान् । तर ११ जनाभन्दा बढी त आउँदैनन् । उता प्राज्ञ सभामा आउने भनेको २४ जनामात्रै हो । यसरी कुल ३५ जना आउने हो प्रज्ञामा । अब त्यसमा आफू पर्यो भने ठिक भयो, आफू परेन भने ठिक भएन भन्ने दृष्टिकोण राख्ने हो भने त कुरो बिग्रिन्छ नै ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्तो निकायमा नियुक्त हुनेले स्वयम्सेवा गर्नुपर्ने प्रचलन बसाल्नुपर्छ सरकारले । यो प्रचलनको थालनी गरिदिने हो भने यो गलत परम्परा हट्छ । मैले अगाडि नै भनेँ, यो त काम गर्ने ठाउँ हो । सरकारले बुढो भइस्, त्यहाँ जा, आराम गर भत्ता खा भनेर पठाउने ठाउँ त होइन यो । मुलुकको प्राज्ञिक उन्नयनका निमित्त लाग्ने र त्यसमा खट्न सक्ने मानिस यहाँ हुनुपर्छ ।
तपाई आफ्नै चाहनाले आउनु भएको हो ?
म चाहेर आएको होइन । प्रधानमन्त्रीसँग कुरा हुँदा जसलाई ल्याउनु हुन्छ चाँडै ल्याइदिनुस् भनेको थिएँ । एकै ठाउँमा दोहोरिएर जाने रहर कसैलाई पनि हुँदैन । मलाई त्यो रहर पनि छैन । फेरि दोहोरिनु भनेको ‘मोनोटोनस’ पनि हो भन्ने लाग्छ । पछि प्रधानमन्त्रीले मलाई तपाई नै जानुपर्छ भन्नु भयो । यहाँ काम हुँदै गरेको अवस्था भएकोले यहाँ अधिकारीको नियुक्त हुनु जरुरी पनि थियो । उहाँले तपाई नै जानुस् भन्नु भएर पनि निक्कै लामो समय पछि मेरो नियुक्ति भएको हो । पहिले पनि मेरो काम देखेरै मलाई एकेडेमीमा ल्याइएको थियो । मलाई सबै नेताहरुले चिन्दछन्, जान्दछन् र यसले काम गर्न सक्छ भन्ने पनि सोच्दछन् । मैले कसैलाई चाकरी गरेर केही लिनुपर्ने कुरै छैन ।
यस पटक के काम गर्ने सोच्नु भएको छ ?
वास्तवमा मेरो भिजन अनुसारको काम गर्ने अवसर मिल्यो भने मैले धेरै काम गर्छु भन्ने सोचेको छु । मैले प्रधानमन्त्रीलाई मेरो सपना बताएको छु । प्रशासनिक भवन अर्कोतिर सार्छु । लाइब्रेरीलाई पाँच तलाको बनाउँछु । र प्रज्ञा भवनका साथै अन्यत्र पनि ‘लिटरेरी म्युजियम’ बनाउने काममा अगाडि बढ्छु । हो, यदि मैले यो काम गर्न सकिन र मैले सोचे जसरी अगाडि बढ्न सकिन भने म बीचमै पनि राजीनामा दिएर हिँड्न सक्छु । यो मैले प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्ट भनिसकेको छु ।
तर मेरो सपना सार्थक हुने संकेत राम्रो देखिएको छ । किनभने प्रधानमन्त्रीले महाकवि देवकोटाको घरलाई म्युजियमका रुपमा विकसित गर्ने भनिसक्नु भएको छ । मेरो चाहना पनि त्यही नै हो । यस कार्यको घोषणा गरिसके पछि प्रमले मलाई यसबारेमा भन्नु भएको थियो । तर हाम्रो जस्तो मुलुकमा घरबारी किनेर म्युजियम बनाउनु जटिल काम हो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले चाहेरै पनि धेरै गर्न सकिएको छैन । तथापि महाकवि देवकोटाको घर म्युजियम बन्ने बाटोमा आएको छ । कविशिरोमणि लेखनाथका विषयमा पनि यसैगरि गर्ने कुरा थियो । तर त्यो पहाडको भीरको जग्गा पनि उनका परिवारले ‘होइन, यो त पुर्खाका निशानी हो, नाती पनातीले हजुरबुबाको सम्पति खोज्लान्’ भनेर पन्छाउने काम गरियो । हो, यि र यस्ता जटिलताहरु हामीकहाँ धेरै छन् । तर पनि महाकविको घरका विषयमा प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेपछि मैले महाकविको परिवारसित भेटेर चिठिपत्र आदानप्रदानको काम भइसकेको छ ।
त्यसैले यो कामले मलाई उर्जा दिएको छ । किनभने महाकविको त्यो घर म्युजियम बन्दा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा रहने गरि निर्माण हुने भनेर सरकारले भनिसकेको छ । त्यसैले सरकारले जुन विश्वास गरेको छ, त्यसलाई पूर्णता दिने काममा म लाग्छु ।
त्यस बाहेक अरु पनि केही काम छन् कि ?
केही अन्तर्राष्ट्रिय कमिटमेन्टहरु छन् । त्यसलाई पूर्णता दिनुपर्ने छ । म उपकुलपति हुँदै दुईवटा काम सुरु भएको थियो । नेपाली अंग्रेजी र नेपालीमा डिक्सनरी बनाउने । त्यो काम सुरु भइसकेको छ । प्रज्ञा नेपाली वृहत् शब्दकोशको काम पनि सुरु गरिएको छ । यो काम अघिल्लो कमिटिबाटै सुरु भएको हो । वृहत शब्दकोशको दशौं संस्करण मानक शब्दकोश नै बनेको छ । यसमा कुनै शंका छैन । अब जुन नेपाली बृहत शब्दकोश आउने भएको छ, त्यसमा डेढ लाख जति शब्द रहने छन् । त्यसका लागि हामीले सबैतिरबाट शब्दहरुको खोजी गरेर त्यसलाई शब्दकोषका रुपमा ल्याउने काम गर्दैछाैं । वास्तवमा हामीले काम गरेरै देखाउने हो । गाली गर्नेलाई काम गरेरै जवाफ दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
एकेडेमीले किताब छाप्छ । तर यसको बिक्री वितरणबाट लेखकहरु सन्तुष्ट देखिँदैनन् किन ?
हामीले अहिले गर्न नसकेको काम नै यही हो । एकेडेमी सरकारी संस्था हो । साझा प्रकाशन पनि सरकारी संस्था हो । सुरुदेखि नै एकेडेमी र जनक शिक्षाले छापेका किताबहरु साझाले बिक्री वितरण गर्दै आएको थियो । साझालाई हामीले बाँकी दिन्थ्यौं र पछि हिसाब फरफारक हुन्थ्यो । साझाको अवस्था अलिकति नाजुक भएपछि हामीले निजी क्षेत्रलाई बेच्न दियौं । निजीले बेचिरहेका पनि छन् । अब हरेक प्रदेशमा हाम्रा किताबहरु पुगुन् भन्ने हिसाबले काम थाल्ने सोचाई छ ।
प्रकाशित मिति: मगलवार, पुष १०, २०७५, ०२:१२:००
नेकपाको मुलबाटो ‘जबज’ : संघीय सांसद रविन्द्रराज शर्मा
नेपालमा प्रतिभावान खेलाडी छन् भन्ने मलाई थाहा थियो
बिहान अण्डाको व्यापार, दिउँसो एक्टिङ र स्कुल